Amaphoyisa acela imininingwane ngokubulawa kowakwa-SABC | News24
Amaphoyisa acela imininingwane ngokubulawa kowakwa-SABC
Johannesburg – Amaphoyisa aseTsakane acela noma ngabe ubani ozibonele noma onemininingwane engasiza amaphoyisa abambe ababulale inhloko yehhovisi lezomthetho kwaSABC, uSizwe Vilakaz, e-East Rand ngoMgqibelo ebusuku.
UVilakazi udutshulelwe lapho kukhokhwa khona eMadisenke Liquor Depot, ku-2331 Masinyane Street, eTsakane, e-East Rand, ngabo-20:30, kusho okhulumela amaphoyisa uSergeant Lerato Mngomezulu.
Uthe amaphoyisa anikele endaweni yesigameko ngemuva kokuthola ucingo oluphuthumayo kodwa kuthe uma efika, uVilakazi,42, ubeseshonile.
Akathathelwanga lutho kanti abantu abathathu okukholakala ukuthi bayathinteka kulesi sigameko babaleke ngemoto yohlobo lwePolo Vivo.
OLUNYE UDABA: Kukhona nowaseNingizimu Afrika kwabathunjwe eLibya
"Singakujabulela ukuthola imininingwane mayelana nalesi sigameko ngokuthi abantu baxhumana nesiteshi samaphoyisa ku-(011)-363- 5300 noma bafonele i-Crime Stop ku-08600 10111 noma ba-SMS ku-32211," kusho uMngomezulu.
"Sisebenza ngokuzikhandla ukuthola abasolwa."
Okhulumela iSABC uKaizer Kganyago udlulise amazwi okukhalisana nomndeni kanye nabangani baVilakazi ngasohlangothini lweSABC.